एनएमबीले ५६ प्रतिशत नाफा बढाउँदा, माछापुच्छेको नाफा १६ प्रतिशतमा खुम्चियो Bizshala -
एनएमबीले ५६ प्रतिशत नाफा बढाउँदा, माछापुच्छेको नाफा १६ प्रतिशतमा खुम्चियो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा एनएमबी बैंक लिमीटेडले उत्साहप्रद प्रगति हासिल गरेको छ । यो बैंकले ५६.१३ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको हो ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको बित्तीय विवरणका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासमा २८ करोड ९ लाख रुपियाँमा सीमित रहेको यसको खूद नाफा चालु आ.ब.को सोही अवधिमा बढेर ४३ करोड ८६ लाख पुगेको छ । एनएमबी बैंक, पाथीभरा विकास बैंक, भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रूडेन्सियल फाइनान्स र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । पाँच वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका कारण समेत खूद नाफामा प्रगति हासिल भएको हो ।
एनएमबी बैंकको खूद ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ । गत वर्षको दोश्रो त्रैमासमा ५२ करोड २३ लाख रहेको ब्याज आम्दानी यो बर्ष चाहि ८० करोड ६० लाख पुगेको छ । मर्जरपछि बैंकको चुक्तापूँजी ४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ र सञ्चित कोष २ अर्ब ८ लाख रुपियाँ रहेको छ । यो बैंकले निक्षेप संकलन निकै धेरै गरेको छ । गत वर्ष दोश्रो त्रैमास अवधिमा २८ अर्ब ९८ करोड रहेको निक्षेप संकलन पाँचवटा संस्था आपसमा मर्ज भएकै कारण समेत यो बर्ष ५० अर्ब ३६ करोड पुगेको छ ।
बैंकको संचालन नाफा ४९ करोड ९१ लाख रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी, बैंकले अघिल्लो आ.ब.को दोश्रो त्रैमासमा कर्जा परिचालन २३ अर्ब ३१ करोड रहेकोमा यो बर्ष बढेर ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । निस्क्रिय कर्जा प्रतिशत ०.६० प्रतिशतबाट बढेर १.६५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको सीडी रेसियो चाहि ७८.५९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी २०.२८ रु. भएको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ १४९.०३ रु. पुगेको छ ।
यसैगरी, माछापुच्छे बैंक लिमीटेडले चाहि चालु आ.ब.को दोश्रो त्रैमासमा १६.६५ प्रतिशतले मात्र नाफातर्फ प्रगति हासिल गरेको छ । यो वाणिज्य बैंकको खूद नाफा गत बर्षको दोश्रो त्रैमास अवधिको ३४ करोड ४० लाखबाट बढेर ४० करोड १३ लाख रुपियाँ पुगेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको बित्तीय विवरणका अनुसार बैंकले अघिल्लो आ.ब.को दोश्रो त्रैमासमा ३९ अर्ब ६१ करोड निक्षेप संकलन गरेकोमा यो बर्ष सोही अवधिमा चाहि ४४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । बैंकको खूद ब्याज नाफा ६६ करोड ९३ लाखबाट बढेर ८२ करोड ११ लाख पुगेको छ । माछापुच्छे बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेको छ भने सञ्चिती चाहि १ अर्ब ४४ करोडको छ । बैंकले चालु आ.ब.को दोश्रो त्रैमास अवधिमा संचालन मुनाफा ६० करोड ३२ लाख मात्र गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आ.ब.को यही अवधिमा संचालन नाफा ३९ करोड ५७ लाख रहेको थियो । यो बैंकले निस्क्रिय कर्जालाई चाहि अघिल्लो आ.ब.को १.७३ प्रतिशतबाट घटाएर ०.४३ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७७.१२ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रति शेयर आम्दानी २४.३० रुपियाँ भई प्रति शेयर नेटवर्थ १४३.६२ रुपियाँ कायम भएको छ ।
एनएमबी बैंकको अध्यक्ष पुनः पवन गोल्यान निर्वाचित, ८ प्रतिशत
काठमाण्डौ । पवनकुमार गोल्यानलाई पुनः संचालक समिति अध्यक्षमा...